နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: Jan. 04 2018 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်တစ်ခုတည်းနည်းလမ်းများဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်း & ဒါကြောင့်သင် Santa Claus နှင့်အီစတာ Bunny အယောင်ဆောင်ဖို့နှင့်သင်မွေးနေ့လက်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်. သာသင်တကယ်သင်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူ tick ကိုဘာလဲဆိုတာသိ. ယနေ့ကျင်းပသည့်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အကတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကျပန်းပြုမူသောအမှု၌လုပ်ကြဖို့အလေ့အကျင့်လုပ်. ကစမ်းကြည့်ပါ & သင်ကချစ်ကြလိမ့်မယ်!
fa La La La luscious! စကားသံကိုသင်ခန်းစာတွေယူပါ. ဒါဟာသင့်ရဲ့စကားပြောစကားသံကိုတိုးတက်ရန်နှင့် အကယ်. သင့်ရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်လှစ်တဲ​​့အခါတိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုပေးတော်မူမည်.
ultra-အလွအိမ်မှာကျောင်း. သင့်ဒေသခံအကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေဧည့်သည်စားဖိုမှူးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကပါတီ Host. ဒါမှမဟုတ်ဒေသတွင်းအကအခုန်စတူဒီယိုထဲကနေ salsa ဆရာမရှိသည်သင်၏နောက်ပုံစံအစုအဝေးမှ zest add. ခင်ဗျား” သူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေး၏လှည့်ကွက်သင်ယူခြင်းကြီးမြတ်ပျော်စရာရှိသည်.
ကိုရွှေ Rush. J-e-w-e-L-r-y ကိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အပိုင်းအစသင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူ. မဝတ်စုံ, အစစ်အမှန်အရာ. အချို့သော Karate သင့် sparkling ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုက်ညီဖို့ Get. ကြီးမားတဲ့ bauble များအတွက်စျေးဝယ်သွားပြီးရင်ပထမဦးဆုံးနေ့လယ်စာရှိခြင်းကအထူး Make. 'ကိုတဦးတည်းကောက်နေမီအများအပြားအပိုင်းပိုင်းပြီးနောက်ကိလေသာစိတ်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူပါ။’
ဘောလိဝုဒ် Babe. ဝမ်းထဲခုန် Start. ထူးခြားဆန်းပြားလှုပ်ရှားမှုများကို, ကာမဂုဏ်ဂီတ, နှင့် sexy ဝတ်စုံ – သင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတွင်ပိုမိုဘာလိုချင်နိုင်? ငါသည်အ www.shira.net မှာစတင်လာဆောင်မှာအဘို့အအတန်းနှင့်ဝတ်စုံစသည်ဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု၏တန်ချိန်ကိုတွေ့ www.bellydancingvideos.com.
အသက်တာတွင်အနုစိတ်သောအရာကိစ္စတွေခံစားပျော်မွေ့. တိုင်းတစ်ချိန်ကခဏ၌သင်တို့၏အရသာအဆင့်မြှင့်တင်. စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောပုလင်းပေါ်မှာ Splurge. တစ်ဦးအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် Delis မှာ caviar ကိုအမြည်း. တစ်ဦး upscale စားသောက်ဆိုင်တွင်မှာဒိန်ခဲပန်းကန် Order. ထို luxe ဘဝ Live.
ကွာ Weekend များအတွက်. ယခုနှစ်ရူး၏အဆုံးကိုကျော်သွားသို့မဟုတ်အချိန်မရွေးယခုနှစ်တဲ​​့တနင်္ဂနွေကွာစီစဉ်ထား. မြေပုံရယူပါနှင့်နှစ်နာရီကြာ drive ကို-အချိန်အချင်းဝက်နှင့်နှစ်နာရီကြာ Air-အချိန်အချင်းဝက်ဆွဲ. တစ်အိတ်ထုပ်ပိုးပြီးမ-ဒါဝေးကွာသောရေပူစမ်းသွားရောက်ကြည့်ရှု, စိတ်ဝင်စားဖို့အိမ်နီးချင်းမြို့တော်, စျေးဝယ်သွားလာလည်ပတ်စရာနေရာများ, သို့မဟုတ်အဆင်းလှသောအစ်မကမ်းခြေ. အနာဂတ်လမ်းတစ်နှစ်ကွာတဲ့တနင်္ဂနွေနှင့်အတူလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်.
အချစ်ဆိုတာအလိုငှါရှင်. သင်ချစ်သောသူတအမှုကိုပြုမှနေ့ရက်တိုင်းအချိန်ကိုယူပါ. သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားနိုင်, အလွန်ကြီးစွာသောစာအုပ်ဖတ်ခြင်း, သို့မဟုတ်မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းထချက်ပြုတ်. အရေးကြီးသောအမှုသည်သင်တို့ကိုချစ်သောသူသည်လူများနှင့်အရာတို့ကိုသင်၏နှလုံးဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်သည်.
© Copyright 2018 ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့. နှင့်ဖွဲ့ အားဖြင့် 8celerate စတူဒီယို